သူငယျခငျြးအရငျးခေါကျခေါကျက စနိုကျကြျော ဖွဈနတေဲ့အခါ - For her Myanmar
သိုငျးလောကထကျ ပိုပွီး ပှလေီရှုပျထှေးသောပါပဲ..
တဈယောကျယောကျကို ခဈြမိပွီဆိုရငျ နာကငျြဖို့အတှကျပါ ကွိုတငျပွငျဆငျထားသငျ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အခုလိုစနိုကျကြျောတှပေေါနတေဲ့ခတျေမှာ သူနဲ့ကိုယျတဈသကျလုံးလကျတှဲ မွဲသှားဖို့ဆိုတာမြိုးက တဈခြိနျက စိတျကူးတှအေဖွဈ ပွောငျးသှားတတျပါတယျ။ စနိုကျကြျောက ကိုယျမမွငျဖူးတဲ့သူဖွဈနရေငျ ကိစ်စဖွတျဖို့ သိပျလှယျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျအရမျးယုံကွညျပွီးခဈြရတဲ့ ကိုယျ့သူငယျခငျြးအရငျးခေါကျခေါကျက စနိုကျကွျောဖွဈနရေငျရော??
ကိုယျတိုငျမကျြစိနဲ့ တပျအပျမမွငျ၊ မကွားဘဲ တခွားသူတဈယောကျရဲ့အပွောနဲ့ ယုံမှားသံသယဖွဈပွီး နှဈယောကျလုံးအပျေါ စိတျကှကျနတောမြိုးဟာ လုံးဝမကောငျးပါဘူး။ သူတို့ပွောတာဟုတျ၊ မဟုတျ ကိုယျတိုငျ သခြောစုံစမျးပါ။ ကိုယျခဈြရတဲ့သူနှဈယောကျကို ဘာမဟုတျတဲ့ သံသယ တဈခုကွောငျ့ အဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့။
Related Article >>> သူငယျခငျြးအမညျခံ စနိုကျကွျောမမြား
ကိုယျခဈြရတဲ့သူနှဈယောကျလုံးက ကိုယျ့နောကျကြောကို ပွိုငျတူဓားနဲ့ထိုးသှားတဲ့အခါ ကြိနျးသတောပေါ့.. စိတျနာရပွီလေ။ ဒီအခြိနျမှာ ကိုယျ့စိတျကိုယျ တညျငွိမျအောငျ ထိနျးဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒေါသနဲ့ ပွီးစလှယျလကျတုံ့ပွနျလိုကျတာက ဘယျလိုမှ ကောငျးတဲ့ဖွရှေငျးနညျးဖွဈလာမှမဟုတျပါဘူး။
(၃) တဈဖကျစောငျးနငျး မဖွဈပါစနေဲ့။
လကျခုပျဆိုတာ နှဈဖကျတီးမှ မွညျတာပါ။ တဈယောကျတညျးအပျေါ အပွဈပုံခပြွီး သူ့ကွောငျ့ဖွဈရတာပါလို့ ကောကျခကျြခလြိုကျခွငျးက ပွဿနာကို မပွလေညျစပေါဘူး။ ဒါဆို တခွားတဈယောကျက ယောငျးကိုနားလှညျ့ ပါးရိုကျလုပျရတာ လှယျသှားပွီလို့ အထငျသေးသှားပါလိမျ့မယျ။
ကိုယျ့အပျေါသစ်စာဖောကျသှားတဲ့သူတှကေို နာကညျြးမိတာ သဘာဝကပြါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ကို အရှကျတကှဲဖွဈစလေိုတဲ့စိတျနဲ့ ဖဘှေ့တျပျေါ စခှငျရှော့တှတေငျ၊ ပုံတှတေငျပွီး လူသိရှငျကွားကွညောလိုကျခွငျးက ကိုယျ့ပေါငျကိုယျ လှနျထောငျးသလိုပါပဲ။ နဈနာရမှာ ယောငျးကိုယျတိုငျပါ။
Related Article >>> သူငယျခငျြးသံယောဇဉျကို ဖွတျတောကျလိုကျဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြခိုငျမာစမေယျ့ အခွအေနေ(၅)ခု
အရှိကိုအရှိအတိုငျးလကျခံပေးလိုကျပါ။ ကိုယျ့ကိုမခဈြလို့ တခွားသူတဈယောကျနောကျ ပါသှားတဲ့ယောကျြားတဈယောကျနဲ့ ကိုယျ့အကွောငျးသိရကျနဲ့ ကိုယျ့နောကျကြောကိုဓားနဲ့ထိုးသှားတဲ့ သူငယျခငျြးအရငျးကို ကိုယျ့ဘေးနား အနာခံပွီး ဆှဲမထားပါနဲ့။ လှတျသာ ပေးလိုကျပါ။ ပွနျလာလညျး လကျမခံပါနဲ့။
(၆) ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဂရုစိုကျပါ။
ငိုပါ။ ငိုနိုငျသလောကျငိုပါ။ ဒါပမေဲ့ ရကျရှညျဆှဲမဖီးပါနဲ့။ မတနျပါဘူး။ ငိုလို့ဝပွီဆို ကိုယျလုပျစရာရှိတာ ဆကျလုပျပါ။ အခြိနျမှနျအိပျ၊ အခြိနျမှနျစားပါ။ တဈယောကျတညျးအပွငျသှားပါ၊ ခရီးထှကျပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုတကျလာရငျ စိတျလညျးအလိုလိုခမျြးသာလာမှာပါ။
ကိုယျလှတျပေးလိုကျတဲ့ မြောကျနှဈကောငျက ဘယျလိုပဲနနေေ လိုကျဂရုစိုကျမနပေါနဲ့။ သူတို့တှဲနသေေးလား၊ ပွတျသှားပွီလား စသဖွငျ့ သိခငျြလို့နောကျယောငျခံစုံထောကျလုပျနခွေငျးက ယောငျးကိုစမတျမဖွဈစပေါဘူး။ ပြျောအောငျနပေါ။ သူတို့မရှိလညျး ယောငျးဘဝကသာယာတယျဆိုတဲ့အကွောငျး သိအောငျပွပါ။
သစ်စာဖောကျတဲ့သူတှကေ ဖောကျသှားကွပါပွီ။ သူတို့တောငျ ယောငျးအတှကျမတှေးတာ ယောငျးက ဘာတှေ လိုကျတှေးနမှောလဲ။ ဒီအခကျြလေးတှအေတိုငျး အေးအေးဆေးဆေးတုံ့ပွနျလိုကျမယျဆိုရငျ ယောငျးဘဝထဲက အမှိုကျသရိုကျတှေ သူ့အလိုလိုလှငျ့သှားမှာပါ။
သိုင်းလောကထက် ပိုပြီး ပွေလီရှုပ်ထွေးသောပါပဲ..
တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်မိပြီဆိုရင် နာကျင်ဖို့အတွက်ပါ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခုလိုစနိုက်ကျော်တွေပေါနေတဲ့ခေတ်မှာ သူနဲ့ကိုယ်တစ်သက်လုံးလက်တွဲ မြဲသွားဖို့ဆိုတာမျိုးက တစ်ချိန်က စိတ်ကူးတွေအဖြစ် ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ စနိုက်ကျော်က ကိုယ်မမြင်ဖူးတဲ့သူဖြစ်နေရင် ကိစ္စဖြတ်ဖို့ သိပ်လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်အရမ်းယုံကြည်ပြီးချစ်ရတဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်က စနိုက်ကြော်ဖြစ်နေရင်ရော??
ကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မမြင်၊ မကြားဘဲ တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့အပြောနဲ့ ယုံမှားသံသယဖြစ်ပြီး နှစ်ယောက်လုံးအပေါ် စိတ်ကွက်နေတာမျိုးဟာ လုံးဝမကောင်းပါဘူး။ သူတို့ပြောတာဟုတ်၊ မဟုတ် ကိုယ်တိုင် သေချာစုံစမ်းပါ။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနှစ်ယောက်ကို ဘာမဟုတ်တဲ့ သံသယ တစ်ခုကြောင့် အဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့။
Related Article >>> သူငယ်ချင်းအမည်ခံ စနိုက်ကြော်မများ
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနှစ်ယောက်လုံးက ကိုယ့်နောက်ကျောကို ပြိုင်တူဓားနဲ့ထိုးသွားတဲ့အခါ ကျိန်းသေတာပေါ့.. စိတ်နာရပြီလေ။ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒေါသနဲ့ ပြီးစလွယ်လက်တုံ့ပြန်လိုက်တာက ဘယ်လိုမှ ကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်လာမှမဟုတ်ပါဘူး။
(၃) တစ်ဖက်စောင်းနင်း မဖြစ်ပါစေနဲ့။
လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်တာပါ။ တစ်ယောက်တည်းအပေါ် အပြစ်ပုံချပြီး သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလို့ ကောက်ချက်ချလိုက်ခြင်းက ပြဿနာကို မပြေလည်စေပါဘူး။ ဒါဆို တခြားတစ်ယောက်က ယောင်းကိုနားလှည့် ပါးရိုက်လုပ်ရတာ လွယ်သွားပြီလို့ အထင်သေးသွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်အပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့သူတွေကို နာကျည်းမိတာ သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို အရှက်တကွဲဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ ဖေ့ဘွတ်ပေါ် စခွင်ရှော့တွေတင်၊ ပုံတွေတင်ပြီး လူသိရှင်ကြားကြေညာလိုက်ခြင်းက ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်းသလိုပါပဲ။ နစ်နာရမှာ ယောင်းကိုယ်တိုင်ပါ။
Related Article >>> သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ကို ဖြတ်တောက်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာစေမယ့် အခြေအနေ(၅)ခု
အရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုမချစ်လို့ တခြားသူတစ်ယောက်နောက် ပါသွားတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းသိရက်နဲ့ ကိုယ့်နောက်ကျောကိုဓားနဲ့ထိုးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်းကို ကိုယ့်ဘေးနား အနာခံပြီး ဆွဲမထားပါနဲ့။ လွှတ်သာ ပေးလိုက်ပါ။ ပြန်လာလည်း လက်မခံပါနဲ့။
(၆) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ပါ။
ငိုပါ။ ငိုနိုင်သလောက်ငိုပါ။ ဒါပေမဲ့ ရက်ရှည်ဆွဲမဖီးပါနဲ့။ မတန်ပါဘူး။ ငိုလို့ဝပြီဆို ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ပါ။ အချိန်မှန်အိပ်၊ အချိန်မှန်စားပါ။ တစ်ယောက်တည်းအပြင်သွားပါ၊ ခရီးထွက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတက်လာရင် စိတ်လည်းအလိုလိုချမ်းသာလာမှာပါ။
ကိုယ်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ မျောက်နှစ်ကောင်က ဘယ်လိုပဲနေနေ လိုက်ဂရုစိုက်မနေပါနဲ့။ သူတို့တွဲနေသေးလား၊ ပြတ်သွားပြီလား စသဖြင့် သိချင်လို့နောက်ယောင်ခံစုံထောက်လုပ်နေခြင်းက ယောင်းကိုစမတ်မဖြစ်စေပါဘူး။ ပျော်အောင်နေပါ။ သူတို့မရှိလည်း ယောင်းဘဝကသာယာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သိအောင်ပြပါ။
သစ္စာဖောက်တဲ့သူတွေက ဖောက်သွားကြပါပြီ။ သူတို့တောင် ယောင်းအတွက်မတွေးတာ ယောင်းက ဘာတွေ လိုက်တွေးနေမှာလဲ။ ဒီအချက်လေးတွေအတိုင်း အေးအေးဆေးဆေးတုံ့ပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင် ယောင်းဘဝထဲက အမှိုက်သရိုက်တွေ သူ့အလိုလိုလွင့်သွားမှာပါ။
Tags: cheat, friends, Friendship, lover, Mistress, Relationship